ပယင်းရောင် အကြည်ရည်တို့ကို ဖန်ခွက် အသီးသီးမှာ ညီတူညီမျှဖြစ်အောင် ချိန်ချိန်ဆဆ ဖြည့်လောင်းလိုက်ချိန်အထိ နှစ်ဖက်နားအစုံသည် ညည်းအူအီတောက်တာ ဦးခေါင်းတွေလည်း ကိုက်ခဲမူးဝေနေဆဲဖြစ်သည်။ တနုံ့နုံ့ အတွေးက အမြင်အာရုံတွေကိုေ၀၀ါးမှိုင်းရီလာစေသလို စိတ်မှာထင်လျက် ပျို့အန်အော်ဂလီဆန်လာပြန်သည်။ သည်အလုပ်က ထွက်ပစ်လိုက်မှ အေးမှာပဲ။ သို့ပေမယ့် အတွေးသည် လက်တွေ့ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်သေးသော စိတ်ကူးတစ်ခုသာ ဖြစ်နေပြန်သည်။
လက်ထဲရှိ ဖန်ခွက်တွေကို ကိုင်မြှောက်ထိတိုက်လိုက်ကြသည်။ လည်ချောင်းဆီမှ အပူစီးချောင်းကလေးက ရင်ထဲမှာ ခပ်နွေးနွေး နေသာစေရုံကလေး ဖြစ်သည်။။ ခန္ဒာကိုယ်အတွင်း လှည့်ပတ်စီးဆင်းနေသော သွေးတွေပါ ချက်ချင်းဆိုသလို နွေးထွေးစွာ လှည့်ပတ်မှု မြန်ဆန်လာတော့သလို စိတ်ထင်ရောက်သည်။ လူလည်း သွက်သွက်လက်လက် ဖြစ်လာပြီ။ သို့ပေမယ့် အတွေးလည်ပြန်က မပြီးဆုံးတတ်သေး။
ဦးစီးမှူးတစ်ယောက် မြို့နယ် အစည်းအဝေး သွားရမည် သတင်းကြားကတည်းက မျက်ခုံးလှုပ်နေခဲ့ကြတာ ဖြစ်သည်။ ဦးစီးပြန်လာလျှင် သူတို့ တစ်ရုံးလုံး အဆူအပြော၊ အကြိမ်းအမောင်းခံရတော့မှာ ဗေဒင်မေးစရာမလိုအောင် သေချာနေတော့ပြီ မဟုတ်လား။
အာလူးကြော် တစ်ဖတ်ကောက်ဝါးလျှက် မြို့နယ် တာဝန်ရှိ ပုဂိုလ်လေးထံ စိတ်မှန်းရောက်ပြန်သည်။ သည်မြို့ကလေးကို ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြင့် မကြာသေး။ ဒါပေမယ့် သူ့ဂုဏ်သတင်းကတော့ အလျှင်အမြန် မွှေးလွင့်လို့ နေခဲ့ပြီ။ အသက်ကလေးက ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိတွေ အားလုံးထက် အပုံကြီး ငယ်နုပေမယ့် အပြောအဆို၊ အမူအယာ ရိုင်းပြခက်ထန်သည်ဟု ပခုံးတွန့်ကြတာ မြင်ရ၊ ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ ဦးလေးအရွယ်၊ အဖေအရွယ် အရာရှိကြီးတွေကို “ခင်ဗျား” လုံးရိုက်ကာ မထောက်မညှာတမ်း၊ ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်တတ်ပါသေး သတဲ့။ လကုန်ရက် အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရတော့မည့် အရေးကို ဋ္ဌာနဆိုင်ရာ ဦးစီးအရာရှိကြီးတွေအားလုံးက တွန့်ဆုတ်လေးကန်လျှက် ရှိနေကြရတော့တာ ဖြစ်သည်။
သူတို့၏ ဦးစီးမှူးသည်လည်း လပတ်အစည်းအဝေးမို့ တက်ရတော့မည်ဆိုလျှင် သားရဲတွင်းထဲ ဆင်းရအံ့ဆဲဆဲ လူတစ်ယောက်လို မူပျက်ကာ ပြာယာခပ်လျှက် မိမိနိုင်စားရသော ရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုသာ မာန်မဲဟိန်းဟောက်နေပြန်တော့သည်ပင်။ အစည်းအဝေးမှ ပြန်ရောက်လျှင်လည်း ကိုယ်တိုင် ဟိန်းဟောက်ခံခဲ့ရသမျှ မကျေနပ်နိုင်ခဲ့သည်များကို ၀န်ထမ်းများ အပေါ်မှာသာ ပြစ်တင်ပုံချကာ တစ်ရှည်တစ်လျား ဆူပူမြည်တွန်ဦးတော့မှာ အတွေ့အကြုံအရ သိနေနှင့်ကြပြီ။
စီးကရက် တစ်လိပ်ကို နှုတ်ခမ်းဖျားမှာ ချိပ်လျှက် ချက်ချင်း မီးမညှိ ဖြစ်သေး။ တကယ်ဆို သူတို့၏ ဦးစီးဟာ အစည်းအဝေးမှာကတည်းက ကျိုးကြောင်းသင့် ပြန်ပြောကာ ဖြေရှင်းပြခဲ့သင့်သည် ဟူသော အတွေးကို ပြီးဆုံးအောင် ဆက်တွေးနေလိုက်သည်။။ အစည်းအဝေးဆိုသည်မှာ ရာထူးအာဏာပိုကြီးမားသူ၏ နှုတ်ထွက်စကား အလုံးစုံကို ထိုင်းနားထောင်ရုံဟု စွဲနေခဲ့ကြတာ ဆိုးလွန်းသည်။ အမည်တပ်ကာ မေးမြန်းလာလျှင် မ၀ံ့တ၀ံ့၊ ၀ှက်ဝှက်ကွယ်ကွယ် လျှောက်တင်ကြလိမ့်မည်။ ဆူပူကြိမ်းမောင်းလာလျှင် ခေါင်းငုံခံလိုက်မည်။ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ခဲမပြေသမျှ ဖောက်ထုတ်ဖွင့်ချချင်လျှင်လည်း အရပ်အနေ မသင့်တော်သေးဟု အံကြိတ်ကာ ဇွတ်မျိုချခဲ့ပေရော့။ မိမိရုံးသို့ ပြန်ရောက်လေမှ ရေငုံခေါင်းငုံ့ခံလာခဲ့ရသမျှ အောင့်လုံးတွေကို မိမိနိုင်စားသမျှရနေသော လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေထံ ပုံချ ဖောက်ခွဲ ပစ်ကြတော့သည် ။
သူတို့၏ ဦးစီးမှူးသည်လည်း နဂိုမူလကတည်းက တစ်ဖက်သား၏ အားနည်းချက်ကို ဖိနင်းအနိုင်ကျင့်ရန် ၀န်လေးလှသူမဟုတ်။ စကားတစ်စရလျှင် မဆုံးစတမ်း၊ မပြီးစတမ်း တဖျစ်တောက်တောက် ရှိတတ်သူ၊ စကားတန်ရှည်ကာ ဇီဇာကြောင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေသေးသည် မဟုတ်လား။
စီးကရက်ကို မီးညှိပြီး အဆုတ်ထဲသို့ အားပါးတရှိုက်သွင်းကာ ဟူးခနဲ မှုတ်ထုတ်လိုက်သော မီးခိုးငွေ့တွေနှင့်အတူ သက်ပြင်းမောတွေပါ ရောနှောလွင့်ပျံလို့သွားသည်။
သည်ရုံးသို့ ဦးစီးအရာရှိအသစ် ပြောင်းလာပြီးကတည်းက အလုပ် လုပ်ရတာ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြတော့တာ ဖြစ်သည်။ အလုပ်ထွက်မယ် ဆိုစကားတွေလည်း ညံနေအောင် ကြားနေရသည်ပင်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့အထိ ဘယ်သူမှ ထွက်စာ မတင်ဖြစ်ကြသေး။ ဆုံလည်နွားတွေလို စိတ်လက်မကြည်သာနိုင်ပါပဲ တပေပေ လည်နေကြပြန်တော့သည်ပင်။
ဖန်ခွက် ထဲမှာ ပြောင်နေပြီ။ ထပ်ဖြည့်ကြရပြန်သည်။
ကိုယ့်အထက်လူကြီးကို အရှိ၊အမှန် ပြန်မပြောရဲကြတာ အရိုးစွဲနေပြီမို့ မကျေနပ်နိုင်လည်းပဲ ဇွတ်မှိတ်အောင့်အည်း သီးခံရပြန်ရသီးတော့မှာပဲ။ ရွေးချယ်စရာ နည်းပါးလှသော အခြေအနေမှာ ကိုယ့်နေရာကိုယ် မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင် လဲသေလိုက်တော့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေတ္တာပို့လျှက် မျက်နှာကို ဆတ်ခနဲမော့သည်။ ဂွတ်ခနဲ…။ နောက်တစ်ခွက်..။
ကိုယ်ရေချိန်ကလေးနှင့်ကိုယ် အိမ်အပြန် ခြေလှမ်းများကတော့ ယိုင်နဲ့နေသော်လည်း မြူးသွက်နေပြန်တာပင်။ မျက်စောင်းတခဲခဲ ရှိနေတတ်သော အိမ်သူကိုပင် ပိုတိုးလို့ ချစ်ကြင်နာချင်မိသည်။ သည်အဖေ၊ သည်အမေနှင့် သမီးလေးလည်း ပါဝင်သော မိသားစုကလေးသည် စည်းလုံးချစ်ကြည်စွာ နေပျော်ကျေနပ်စရာ ဟု သူ မကြာခဏ တွေးလျှက် ဂုဏ်ယူချင်ပြန်သည်။။
သို့ပေမယ့် ခက်တာက သမီးပဲ ဖြစ်သည်။
… လျှာလေး၊အာလေးနှင့် ခေါ်လျှင် တုန့်ပြန်မထူးချင်တော့။ ပွေ့ချီချော့မြူမွှေးကြူချင်မိလျှင်လည်း ပြေးရှောင်ပုန်းလျှိုးနေတတ်သည်။ မိခင်ကိုသာ အတင်းဖက်တွယ်တက်ကာ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို ကျုံ့ဝင်သွားတော့မတတ် ပုဝင်ပုန်းခိုနေပြန်တာ အသည်ယားချင်စရာ။ မရှောင်နိုင်သည့်အဆုံး အဖေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ အမိခံလိုက်ရလျှင်တောင် ကိုယ်ကို လ်ိန်တွန့် ရုန်းကန်နေပြန် သေးတော့ မခက်လား။
“သမီးရေ..။ လာဦး၊ ဖေ့ဆီကို လာပါဦး”
သူ့အသံ ဗလုံးဗထွေးကြီးကို သမီးက မတုန့်ပြန်ပါ။
အလုပ်ထဲမှာ၊ အများနှင့် ဆက်ဆံရာမှာ စိတ်ရှည်သီးခံတတ်သူအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသောသူက အိမ်မှာတော့ စကားတစ်ခွန်းကနေ နှစ်ခွန်းဆင့်လာရလျှင် ဒေါသစွက်ချင်ပြီ။ မူးနေသော အရှိန်ကလေးကလည်း သူ့ ဒေါသ အရှိန်ကို ဒီဂရီတိုးမြင့်စေသည်။ သမီးကလည်း သူ့ဒေါသရိပ်ငွေ့ကို မြင်သိနားလည်နေပြန်ရာ ပို၍ပင် အနားကပ်မခံတော့ပြန်။
“ကျုပ်က ညည်းအဖေလေ။ မမှတ်မိတော့ဘူးလား”
ဖခင်၏ ခနဲ့တဲ့တဲ့ အပြောကို အကင်းပါးသော သူငယ်တန်းကျောင်းသူမကလည်း ရိပ်မိနားလည် နေသည်ပင်။
“လာ.. ဖေ့ကို အာဘွားပေးပါဦး သမီးလေးရယ်”
တရိပ်ရိပ်၊ တရှိန်ရှိန်တက်လာနေသော ဒေါသတွေကို ဇွတ်မြိုချကာ လေသံကိုလည်း လျှော့ချပစ်ရသည်။ တကယ်တော့ သမီးက အမေထက်၊ အဖေကို ပို၍ ခင်မင်တွယ်ကပ်တတ်သူ ဖြစ်ပါသည်။ အရပ်ထဲက ရင်းနှီးသူတွေထဲမှာ မူးရူးသောင်းကျန်းနေတတ်ကြသူတွေကို သမီးမြင်တွေ့ဖူးထားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အမူးသမားဆိုလျှင် သမီးက ကြောက်လန့်နေတတ်ပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံ အဖေ၊ အမေတို့ကလည်း အခွင့်သင့်တိုင်း သမီးကို ထိုအမူးသမားတွေနှင့် လှည့်ပတ်ခြောက်လှန့်ခဲ့ကြဖူးသည်။ ခုတော့ အမူးသမားဆိုလျှင် အဖေကိုပင် အနားမကပ်ချင်တော့ပေ။
“ကလေး သူ့ဘာသာ နေပါစေကွယ်။ ထမင်းပွဲ ပြင်ပြီးပြီ။ လာ.. စားလိုက်တော့”
ဇနီးသည်က သူ့အား ချော့ချော့မော့မော့ အာရုံလွှဲရန်ကြိုးစားသည်။ သို့ပေမယ့်…
“မင်း အသာနေစမ်းပါ။ သမီး…လာစမ်း ဆို ။ ဖေဖေ ခေါ်နေတာ”
မိခင်၏ ရင်ခွင်ကြားမှ ကလေးငယ်ကို ဇွတ်အတင်း ၀င်လုသည်။ အမေက ကလေးအသား နာကျင်မှာ စိုးရိမ်သောကြောင့် အလိုက်သင့်လွှတ်ပေးရှာသည်။ သမီးငယ်က ကြောက်လန့်တကြား တွန်းထိုးရုန်ကန်တော့ပြီ။
လက်ဖ၀ါးတစ်ဘက် သမီး၏ တင်ပါးပေါ် ရောက်သွားသည်။ သမီးက စူးစူးဝါးဝါး အော်ငိုတော့၏။
လက်ဖ၀ါး တစ်ဖက် နောက်တစ်ချက်။ သမီးက အသံအထွက်ရဲတော့သော်လည်း မျက်ရည်တွေကျကာ ကိုယ်လုံးလေးပင် တုန်ရင်နေပြီ။
ဇနီးသည်၏ တောင်းပန်မှုက အရာမရောက်ပါ။
“နောက်တစ်ခါ အဖေခေါ်ရင် တစ်ခွန်းထဲနဲ့ လာမှာလား”
“မေးနေတယ်လေ။ နောက်တစ်ခါ အဖေခေါ်ရင် တစ်ခွန်းထဲနဲ့ လာမှာလားလို့ ”
အမေက မနေနိုင်စွာ ၀င်ပြောပေးလေမှ သမီးက ခပ်ဆဆ ခေါင်းညိတ်ပြဖော်ရတော့သည်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း သမီးက ခေါင်းညိတ်ပြလာသောအခါ မကျေနပ်နိုင်တော့ပြန်။
သမီးက အသံတိတ် ကြိတ်ရှိုက်နေပြန်သည်။
‘ဟေ့။ မေးနေတာ ပြောလေ”
သမီး၏ နှုတ်ခမ်းလေးများက တလှုပ်လှုပ်။ သို့သော် အသံထွက်မလာ။ သူလိုချင်သော အဖြေကို မရရှိခြင်းက သူ၏ ဒေါသကို မီးလောင်ရာ လေပင့်ပေးသလိုပင်။ သမီးက သူ့ကို အာခံသလား။ သူ့လက်တစ်ဖက် လေထဲမြောက်တက်သွားသည်။ သမီးက ကျီခနဲ အော်ဟစ်ငိုလိုက်သည်။ မိခင်က သမီးကို ပြေးပွေ့ကာ သူ့အား ရန်တွေ့ရင်းငို၏။ သူတို့မိသားစုကလေး၏ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု အပြီးသတ်ကို သူ.. မမှတ်မိနိုင်တော့လောက်အောင် မူးရီမှောင်မိုက်သွားခဲ့တော့သည်။
ကြိတ်မြုံထားရသော အနာတရတို့သည် မမြင်သာသည်မို့ မေ့ချင်ဟန်ဆောင်လို့ ရနေသည်ထင်ပါ၏။
နောက်တစ်နေ့နံနက်လင်းကတည်းက သမီးအား ဇွတ်ပြန်ချော့ရင်း၊ မုန့်ဝယ်ကျွေးရင်း၊ အရုပ်တွေ လိုက်ဝယ်ပေးရင်း သူတို့၏ မိသားစုလေးကြားမှာ ပုံမှန်ခံစားမှုဖြင့် ချမ်းမြေ့ကြည်နူးဖွယ်ရာ ပြန်ဖြစ်နေပြန်ပြီ။ သို့သော်…
“နောက်တစ်ခါ ငါခေါ်ရင် တစ်ခွန်းထဲနဲ့ လာမှာလား။ မေးနေတာ ဖြေလေ…။ ကဲဟယ်…။ ဖြန်း… ဖြန်း…။ အဲဒါ ငါ့ကို အာခံဦး။ ပြန်မပြောပဲ ပါးစပ်ကြီး ပိတ်နေဦး ။ ဖုန်း…”
သမီးက သူ့နှင့် ရွယ်တူနီးပါး Pooh အရုပ်ကြီးကို ၀ါးခြမ်းတစ်ချောင်းနှင့် တဖြန်းဖြန်း၊ တဖုန်းဖုန်း ရိုက်နှက်နေပါသည်။ နှုတ်ကလည်း လူကြီးတစ်ယောက်နှင့် မခြား တတွတ်တွတ် မြည်တွန်ကြိမ်းမောင်းနေပြန်တော့သည်။ သူ သမီးအနားသို့ ညင်သာစွာ တိုးလှမ်းလျှက်…
ခပ်တိုးတိုး ခေါ်လိုက်လျှင် သမီးက ဟီးခနဲ ရှက်ရယ် ရယ်မောလိုက်လျှက်…
“အရုပ်ကြီးနဲ့ ရိုက်တမ်းကစားနေတာလေ ဖေဖေ။ သူက သိပ်ခေါင်းမာတာပဲ။ ဒါကြောင့် မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်အောင် တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီး ဆုံးမနေရတာပေါ့”
သူ့ မျက်နှာ နွေးခနဲ ပူသည်။ သို့သော် သမီးမသိအောင် သက်ပြင်းကြိတ်ရှိုက်လျှက်…
“ကဲ.. လာပါ သမီးရယ်။ သမီးပဲ မြို့ပြင်ထွက်ပြီး ဆိုင်ကယ် စီးချင်တယ်ဆို။ မေမေရော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ခေါ်လိုက်တော့…”
သမီးက မေမေ့အခန်းထဲသို့ ပြေးသွားမည် ဟန်ပြင်ပြီးမှ ချာခနဲ နောက်ပြန်လှည့်ကာ…
“ဟွန်း.. ငါ့စိတ်ကို နင်သိတယ်နော် ။ဖေဖေရှိလို့ နင် သက်သာသွားတယ် မှတ်ပါ။”
သမီးက သူ့ထံ တစ်ချက်ပြုံးပြကာ ရွှင်သွက်မြူးပြပြေးထွက်သွားလေလျှင် သူကတော့ လက်ထဲမှာ သမီးထံမှ ဆွဲယူထားလိုက်ရသော ၀ါးခြမ်းတစ်ချောင်းကိုင်လျှက်၊ ငူငိူင်လျှက်…။ ။
Posted by သတိုး at 9:55 PM
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 22, 2012 at 11:16 PM
ဟုတ်တယ်နော် ..အတုမြင်အတက်သင်နေတဲ့ ကလေးအရွယ်.... နဲ့ အလုပ်ကအဆင်မပြေမှုတွေကို တစ်ယောက်တစ်မျိုး ထွက်ပေါက်ရှာကြတဲ့ အခါ.....
THININI January 23, 2012 at 5:25 AM
ဆူးသစ် January 23, 2012 at 9:31 AM
ကိုသတိုးက ရေးလက်ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော်ကတော့ ၀တ္ထုတိုကိုအဲဒီလောက်အတွေးစိတ်ပြီးရေးရတာမျိုးကို ရေးဖို့အတွေးသိပ်မရတတ်ဘူး။ ဆက်လုပ်ပါဗျာ။ ကောင်းပါတယ်။ အားပေးပါတယ်။
မြသွေးနီ January 23, 2012 at 10:53 AM
စိတ်ထဲက အစိုင်အခဲတွေကို နေရာလွှဲမှားပြီး ပေါက်ခွဲပစ်လိုက်တဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို သမီးဖြစ်သူရဲ့ သိစိတ်ကနေ မှတ်ပြီး ပညာပေးသွားတာလေးက အဖေ့အတွက် ကြေကွဲစရာ...။
ငြိမ်းစိုးဦး January 23, 2012 at 11:00 AM
သန့်စင်မှုကို အရောင်တွေဆိုးတာ ဘယ်သူတွေလဲ ... လို့မေးကြည့်ပြီး ... အာဏာပြတဲ့ လူကြီးတွေပဲ လို့ ဖြေမိစေပါတယ် ...
လငျးခတျေဒီနို January 23, 2012 at 1:23 PM
ကိုသတိုး . . ကိုသတိုး ၀တ္ထုလေးကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ကျနော် မြတ်ပန်းနွယ်ရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးနဲ့ ယှဉ်တွဲပြီး သတိရမိတယ် . . အဖေနဲ့ သမီး ရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကိုပေါ့ . . . အတုမြင် အတတ်သင် . . ကလေးတွေဟာ ပင်ကို သဘာဝ ရိုးစင်းလှပါတယ် . . လူကြီးတွေဆီက မြင်တဲ့ အရောင်ကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဆိုးလိုက်တတ်ကြတယ်
မြစ်ကျိုးအင်း January 25, 2012 at 1:06 AM
ကလေးလေးရဲ့ အပြုအမူလေးက ဒီဇာတ်လမ်းကို အမြင့်ဆုံး ပို့ပေးလိုက်တာပါပဲ။ အဆင့်လိုက် စိတ်ထွက်ပေါက်လေးတွေကို စီကာစဉ်ကာ ပြသွားတာ လှတယ်။
ရေယဉ်ငယ် စီးပါလို့ ရေစီးငယ် ဘောင်ဘင်